Torapasika 8 eto amin'izao tontolo izao izay manazava amin'ny alina | Fitsangatsanganana tanteraka
Torapasika 8 eto amin'izao tontolo izao izay mamirapiratra amin'ny alina
Alberto Legs | | Aostralia, Karaiba, Japana
Rehefa nahita ny sarimihetsika Avatar isika rehetra taona vitsivitsy lasa izay, maro amintsika no maniry vetivety fa tena nisy teto an-tany ny filalaovana fluorescent izay natolotry Andriamatoa James Cameron tamin'ilay sarimihetsika. Raha ny marina, mihoatra ny iray ny mpanaraka ny sarimihetsika no nanana olana lehibe tamin'ny fiatrehana ny zava-misy, Pandora dia toerana noforonina ary ny ala mikitroka sy ny faritra hafa amin'ny jeografia napetraka dia mety tsy nisy velively.
Na izany aza, raha mijery morontsiraka sasantsasany eto amin'ny planeta misy antsika isika fa angamba tsy nisy olona sahy nijery taona vitsivitsy lasa izay, dia hahita tranga voataona amin'ny fomba manokana amin'ny bioluminescence, tranga iray ateraky ny karazana fitoplankton izay voaforona zavamiaina bitika antsoina hoe dinoflagellates izay hafafiny ary misy jiro manga eny amoron'ny Tany, izay mampifangaro ny lanitra feno kintana amin'ireo tantsambo amin'ny takariva. Fijerena izay sarotra eritreretina rehefa resin'ny resin'ny natiora fa azo jerena amin'ny fotoana sasany amin'ny taona, indrindra raha manangasanga fitsangatsanganana eo an-toerana ianao.
Te hahafantatra ve ianao hoe inona ireo Torapasika 8 eto amin'izao tontolo izao izay mamirapiratra amin'ny alina?
1 Vaadhoo Beach (Maldives)
2 Ilay lava-manga (Malta)
5 Lagoon Luminous (Jamaika)
6 Holbox (Mexico)
7 Toyama Bay (Japon)
8 Gippsland Lakes (Aostralia)
Vaadhoo Beach (Maldives)
Ny morontsiraka bioluminescent malaza indrindra eto an-tany Any amin'ny toerana miafina ao afovoan'ny nosy Maldives no misy azy ary antsoina hoe Vaadhoo, paradisa iray izay mpizahatany mihoatra ny iray no nanatri-maso ireo onjan'ny manga neon teo ambanin'ny lanitra feno kintana. Ny zavatra mahaliana momba ity morontsiraka ity dia eo am-pelatanan'ny mpitsidika sasany izay, rehefa manondraka rano, dia mamela dian-java-manga manjelanjelatra amin'ny fasika, mivadika ho fahitana miavaka fotsiny. Ny malaza indrindra eo amin'ny tontolon'ny torapasika izay mamiratra amin'ny alina.
Ilay lava-manga (Malta)
Eoropa dia tsy afa-miala amin'ny vokatry ny bioluminescence, ny ny Mediteraneana dia iray amin'ireo faritra misy fisehoana manga lehibe indrindra amin'ny fotoana sasany amin'ny taona amin'ny zoro mitokana, miaraka amin'ny fahazoana mpizahatany somary sarotra kokoa. Ny iray amin'ireo ohatra tsara indrindra dia fantatra amin'ny hoe Cave Blue (na Blue Grotto) any atsimon'ny nosy Maltese, manokana kokoa amin'ny manodidina ny tanànan'i Zurrieq.
Mandritra ny vanin-taona fahavaratra, ity morontsiraka ity, izay malaza amin'ny fivezivezena na ny sidina, dia tsara indrindra amin'ny fahasahiana misarika ny fahitana ireo onja manga elektrika izay mipoitra tampoka amin'ny misasakalina. Torrey pines tora-pasika Tsy io ihany no kilaometatra mamirapiratra any Etazonia Manasquan Beach, New Jersey, na Navarre Beach, Florida morontsiraka roa hafa hahafinaritra ny bioluminescence ao amin'ny Giant Yankee. Raha ny marina, ny fizahan-tany any Florida dia efa nampitandrina fa ny fahitana an'io fisehoan-javatra io eny amoron'ny morony dia mamela ny trondro hitovy amin'ny papango amin'ny lanitra maizina. Mahagaga.
Atsimon'ny nosy Vieques, izay an'i Puerto Rico, dia manafina ny Mosquito Bay, lagoon iray malaza amin'ny bioluminescence azy no lasa manintona ny mpizahatany amin'ny alina amin'ny endrika fitsangatsanganana kayak. Vao tsy ela akory izay, ny fametrahana paompy ampiasaina hanadiovana ny maloto no nahatonga ny fampiatoana an'ity seho ity, izay mitranga ihany koa amin'ireo farihy hafa ao amin'ny nosy Puerto Rican. Saingy tsy ny toerana any Karaiba ihany no resin'ny bioluminescence.
Lagoon Luminous (Jamaika)
Tsy i Puerto Rico irery no mpandray anjara amin'ny bioluminescence fa nandritra ny vanim-potoana fanjanahantany dia noheverina ho fanatrehan'ny devoly ireo mpikaroka Espaniola tonga tany amin'ny Tontolo Vaovao, dia i Jamaika, indrindra ny Lagoon Luminous of Trewalny, faritra iray malaza amin'ny toerana misy azy ny paroasy manan-danja indrindra.ny firenen'i Bob Marley lehibe, toerana iray izay manjary manga ny rano amin'ny fotoana sasany amin'ny taona.
Mexico dia firenena iray hafa misy ny bioluminescence amin'ny faritra samihafa amin'ny jeografia, ny nosy Holbox, any Quintana Roo no tena mahavariana. Nosy saika virjiny iray izay ny volon-dranomasina dia tototry ny loko manga sy maitso mandritra ny vanim-potoana samihafa amin'ny taona, indrindra amin'ny vanim-potoana orana, ary ampiarahin'ny hafa nisongadina mamirapiratra toa ny morontsirak'i Campeche na ny lagoon Manialtepec, 15 kilometatra miala an'i Puerto Escondido.
Toyama Bay (Japon)
© Blog fitsangatsanganana & fitsangatsanganana
Ao amin'ity helodrano misy azy ity Honshu, avaratr'i Japon, ny bioluminescence dia mitranga noho ny fisehoan'ilay antsoina hoe squidly squidly, karazana iray izay miakatra ambonin'ny volana martsa ka hatramin'ny jona, izay mamoaka ireo antsoina hoe phosforos manga izay manototra ny vatany, vokany izay miteraka ny ranomasina voaloto miaraka amin'ny bubble manga.
Gippsland Lakes (Aostralia)
Ilay mpaka sary Phil Hart nandany alina maromaro nitety ilay Gippsland Lakes, andiana haavo masira mifanila amin'ny Farihin'i Victoria any atsimon'i Aostralia. Dia iray izay niteraka ohatra lehibe indrindra amin'ny bioluminescence hita maso amin'ireo farihy ireo tamin'ny fahavaratry ny 2008, daty nanatanterahan'i Hart an'ity sary ity manga tamin'ny fakantsary.
ireo Torapasika 8 eto amin'izao tontolo izao izay mamirapiratra amin'ny alina Izy ireo no ohatra tsara indrindra amin'ny vokatr'izany antsoina hoe bioluminescence izay mamindra ny firafitry ny siansa foronina amin'ny siansa ho an'ny planetantsika manokana, miandry ny mpizahatany tsy mivaky loha amin'ny fikarohana ireo tsiambaratelo manga ireo.
Sahinao ve ny miditra amin'ireo nofinofy manga ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Torapasika 8 eto amin'izao tontolo izao izay mamirapiratra amin'ny alina
Sakafo maraina Soeda mahazatra
Akanjo nentim-paharazana holandey